mashoko uye mamiriro
Aya mazwi akajairwa uye mamiriro anoshanda kune chero kushandiswa kwewebhusaiti www.myweedseeds.com ("www.myweedseeds.com"), kune chero masevhisi anowanikwa pawebhusaiti uye kune chero uye zvese zvinopihwa, mirairo nezvibvumirano zvakabatana nazvo.
Iwo mazwi uye mamiriro achave anoshanda mukuwedzera kune chishamiso, chinowanikwa pawebhusaiti. Kana paine kusapindirana pakati pemitemo nemamiriro uye nechiratidziro, mazwi nemamiriro acho achakunda.
Chinyorwa 1 - General
Iwe unobvuma uye unovimbisa kuti nekushandisa masevhisi awasvika zera ramakore makumi maviri nerimwe. Iwe unozvipira kutevedzera nemazvo mirairo yese yakataurwa paWebhu saiti ne, pakati pezvimwe zvinhu, ichipa ruzivo rwechokwadi, rwechokwadi, rwazvino uye rwakakwana nezvako.
Chisungo chechipiri - Hapana kushandiswa zvisiri pamutemo kana kurambidzwa
Unozvipira kuti usashandise masevhisi pazvinhu zvisiri pamutemo kana kupesana nemitemo iyi nemitemo yekushandisa kana chero, kana zvirizvo, mamwe mazwi anoshanda.
Chinyorwa 3 - Kurambidzwa / kumiswa
www.myweedseeds.com inochengetera kodzero, mukufunga kwayo kwega, kumisa kupinda kwako kune vese kana chero chikamu cheMasevhisi chero nguva chero chikonzero chero chipi zvacho pasina ziviso yekutanga kana mutoro. Chikonzero chekumiswa kwakadai kunosanganisira, asi kusingogumira kune, (a) kutyora kana kutyora kweMitemo neMamiriro uye / kana Mitemo Yekushandisa, (b) zvikumbiro nemutemo, (c) zvisingatarisirwe zvehunyanzvi kana zvekuchengetedza nyaya kana matambudziko, uye (d) nguva dzakareba dzekusaita basa.
Chinyorwa 4 - Kiredhiti Kadhi kushandiswa
Zvese zvinopihwa zvinoitwa ne www.myweedseeds.com hazvina kuzvipira kudzamara wagamuchira kubvuma kwekugamuchirwa kubva ku www.myweedseeds.com, kunoitwa chibvumirano. Iwe unoziva nezve matanho ehunyanzvi anotungamira kumagumo echibvumirano, kuti chibvumirano chinochengetwa here uye chinowanikwa, uye mitauro umo chibvumirano chingagadziriswe. www.myweedseeds.com haina kusungirwa kukupa ruzivo kwauri maererano neizvo zvataurwa pamusoro pekupedzisira kwechibvumirano.
Chinyorwa 5 - Kuendesa uye kutumira info
Iyo nguva yekuendesa ine yakakwira mazuva makumi matatu kubva panguva yekubhadharisa. Asi dzimwe nguva tsamba mhiri kwemakungwa dzinononoka.
Chinyorwa 6 - Kuvimbiswa Kununurwa
www.mubedeoeds.com inovimbisa kuendesa pasi rose. Hazvigoneke kuti isu tiongorore mitemo yese munyika dzese, tarisa yako yemunharaunda mitemo nezvekutambira mbanje genetics. Kana iwe uchigara munyika dai zvaisabvumidzwa kupihwa mbanje genetics, iwe unofanirwa kuziva nezve njodzi yekubatwa nevakuru vemunharaunda.
Chinyorwa 7 - Mhosva
www.myweedseeds.com inovimbisa zvigadzirwa zvese zvakarairwa trough www.myweedseeds.com ndezvechokwadi uye mbeu dzese dzinovimbiswa kusvika pamakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe muzana ekumera mwero apo mbeu dzakaratidza matanho ekumera anoteerwa. Nekuhodha zvigadzirwa trough ino webhusaiti, iwe unotora zvese zvisungo uye kuburitsa www.myweedseeds.com uye chero vanobatana kubva kune chero chikwereti chero. Mbeu dzembanje dzinopihwa pa www.myweedseeds.com dzinoitirwa kurapwa uye nekutsvagisa zvinangwa chete; www.myweedseeds.com haizopihwa mutoro kune chero chimwe chinangwa chekushandisa.
Chinyorwa 8 - Tsika
www.myweedseeds.com hazvireve kuti tsika hadzitore zvigadzirwa zvarairwa newe. Kana zvakadaro ndiyo nyaya www.myweedseeds.com isingadzosere chero muripo kwauri, asi kana wawana humbowo hwekutorerwa, dzorerazve chigadzirwa.
Chisungo 9 - Webhusaiti ruzivo / mifananidzo
Ruzivo rwese ruri pane ino webhusaiti [magwara] anowanikwa nevechitatu mapato. Iyo mapikicha / mifananidzo pane ino webhusaiti inouya kubva kwakasiyana masosi. Panogona kunge paine mafoto / mifananidzo pane ino webhusaiti izvo zvisina kupihwa nemuridzi zviri pamutemo. Kana zvirizvo, ndapota taura nesu. Isu ticha, mushure mekufunga, tibvise iyo foto / pikicha kubva pawebhusaiti.
Chinyorwa 10 - Zvakasiyana-siyana
www.myweedseeds.com inochengetera kodzero yekugadzirisa aya mamiriro uye mamiriro chero nguva. Shanduko dzakadai dzinofanirwa kushanda nekukasira pamitemo nemamiriro. Aya mazwi anoumba chibvumirano chose chemapato uye anotsiva chero nezvibvumirano zvepamberi nezvinoitika zvemapato zvine chekuita nenyaya. Kana kupihwa kupi kweiyi Mitemo kwakatemwa kuve kusingashande kana kusamanikidza, saka kusagadzikana kwakadaro kana kusagadzikana hazvigone kukanganisa chero kupi kupi kupi kweichi chirevo chematemu aya, ese ayo anoramba ari musimba zvizere uye kushanda.